ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Double down, To get your act together နဲ့ Drawared line တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
Double (နှစ်ဆ)၊ down (အောက်) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အောက်ကိုနှစ်ဆချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက Blackjack ဆိုတဲ့ Casino လောင်ကစားနည်းကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Blackjack ဖဲကစားနည်းမှာ ဒိုင်က ပထမ ဖဲနှစ်ချပ်ကို ဝေအပြီးမှာ ကစားသမားက ကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေတဲ့ ဖဲတွေရဲ့ အခြေအနေက ကောင်းနေရင်၊ ဒိုင်က နောက်ဆုံးတချပ် မဝေမီ၊ ပထမ လောင်းကြေးကို နှစ်ဆတိုး လောင်းခွင့်ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းတော့ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဖဲနှစ်ချပ်က နိုင်ခြေများတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က ပိုအတင့်ရဲလာပြီး လောင်ကြေးနှစ်ဆတိုးတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း လူတဦးအနေနဲ့ အခြေအနေက ကောင်းလို့ တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အတင့်ရဲပြီး နှစ်ဆတိုးရင်းပြီး လုပ်ဆောင်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဆတိုး ဖိအားပေးတာမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတ Donald Trump က အခုတလော နိုင်ငံတကာကို စစ်များဖြစ်နေတော့မလား စိုးရိမ်စေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ပြောဆိုမှုများနဲ့ ပတ်သက်လို့ မကြာသေးမီကပဲ မြောက်ကိုရီးယားကသာ နျူကလီယားလက်နက်တွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်မယ်ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ Fire and Fury မီးကုန်ရမ်းကုန် အမေရိကန်ဘက်က တုံ့ပြန်မယ်လို့ ပြောခဲ့သလို အခုလို ပြောလိုက်တဲ့ စကားကို မြောက်ကိုရီးယားကလည်း အမေရိကန်လက်အောက်ရှိ Guam ကျွန်းကို မကြာမီပစ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီလို့ ပြန်ပြောရာမှာ Trump ဘက်လည်း သူပြောတဲ့ စကားတွေက သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ သဘောများ သက်ရောက်နေသလားလို့ ပြန်ပြောပြီး အမေရိကန်ရဲ့  စစ်ရေးအခြေအနေဟာ Locked and Loaded ဆိုပြီးတော့ ပြန်ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတင်းမီဒီယာတွေက Trump doubles down on North Korea ဆိုပြီးတော့ Trump က မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ဖိအားပေး လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ ရေးသားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
President Trump doubles down on threat against North Korea as nuclear tensions escalate.
နျူကလီးယား ပတ်သက်လို့ တင်းမာမှုတွေ တိုးနေချိန်မှာ သမ္မတ Trump က မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ နှစ်ဆတိုး လုပ်ဆောင်နေတယ်။
(၂) To get your act together
To get (ရဖိုလုပ်တာ)၊ your act (တခုခုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင့်ရဲ့အပြုအမှု ဒါမှမဟုတ် လုပ်ရပ်)၊ together (တစုတစည်းတည်း၊ အတူတကွ) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ အပြုအမှုကို စနစ်တကျ အစီအစဉ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက ဖျော်ဖြေပွဲ၊ ပြဇာတ် စသည်တို့ကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဦးအနေနဲ့ ဘယ်အခန်းမှာ ဘာပြောရမယ်၊ ဘယ်လိုအမူအရာ လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို စနစ်တကျ ကြိုသဘောပေါက်နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်ဟာတွေက ဘာတွေဖြစ်တယ်။ ဘာပြီးရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို လူတဦးအနေနဲ့ စနစ်တကျ သိအောင်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းတော့ ဗရမ်းဗတာ မဖြစ်ဘဲ၊ အစီအစဉ်တကျဖြစ်အောင် အခြေအနေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၊ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်အောင် လုပ်တာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတ Trump က ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong-un အနေနဲ့ တောင်ပြောမြောက်ပြောနေတဲ့ အနေအထားကနေ ကိုယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပထမ သဘောပေါက်အောင်လုပ်ပါလို့ သတိပေးလိုက်ရာမှာ Trump tells North Korea to get its act together or else ဆိုပြီးတော့ မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ တာဝန်သိတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ရမယ်။ မလုပ်ရင်တော့ အသိပဲလို့ Trump က ပြောလိုက်တာကို သတင်းခေါင်းကြီးတွေက ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Jane is so disorganized ! I wish she would get her act together.
Jane က တကယ်ကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်းပါပဲ။ ကျနော်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ သူလုပ်ရကိုင်ရမယ့်ဟာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့စနစ်တကျ ရှိစေချင်တယ်ဗျာ။
(၃) Drawared line
Draw (ဆွဲတာ၊ တားတာ)၊ared line (မျဉ်းကြောင်းနီ) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က မျဉ်းကြောင်းနီကို ဆွဲတာ ဒါမှမဟုတ် တားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို နိုင်ငံရေးနဲ့ သံတမန်ရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းလာကြတာ တွေ့ရပြီ။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တုန်းက ထိုစဉ် အစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Yigal Allon က အာရပ်နိုင်ငံတွေကို သတိပေးရာမှာ အစ္စရေးကို အာရပ်နိုင်ငံတွေက ထိပါးလာရင်၊ သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ အနေအထားဟာ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အစ္စရေးက သတ်မှတ်ပြီးသာဖြစ်တယ်လို့ ပြောရာမှာ Drawared line ကို စသုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဘယ်အထိဘဲသည်းခံမယ်ဆိုတာကိုသိစေတာ၊တနည်း မကျော်ရလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကို ရေးဆွဲထားတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဟာ အခုတလော အမေရိကန် နိုင်ငံရေးလောကမှာ အထူးသဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန်တို့ ဘတပြန် ကျားတပြန် ပြောဆိုနေကြတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းတွေမှာ ရေးသားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတ Trump က မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong-un အနေနဲ့ နျူကလီးယား ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ မလုပ်ဖို့ပြောပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံဘက်က သည်းခံနိုင်စွမ်း နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ချပြလိုက်ရာမှာ မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ICBM တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးလက်နက်မှာတပ်နိုင်တဲ့ နျူကလီးယား အသေးစားကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီ၊ ပစ္စဖိတ်ပင်လယ်မှာ အမေရိကန်လက်အောက်ရှိ Guam ကျွန်းကို မကြာမီ ရက်တွေအတွင်း တိုက်တော့မယ်လို့ ပြန်ကြားခဲ့တဲ့အတွက် သတင်းမီဒီယာတွေက North Korea is fast approaching Trump’s red line – Trump တားထားတဲ့ မျဉ်းနီကို ဖြတ်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယားက နီးသထက် နီးလာနေပြီလို့ ရေးသားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The international community has drawnared line against the use of chemical weapons during war.
စစ်တိုက်ရင် ဓါတုလက်နက်တွေ ကိုအသုံးမပြုရဘူးဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုနိုင်ငံတကာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကချမှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေက Double down, To get your act together နဲ့ Drawared line တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။